“Bruno Fernandes waxa uu faa’iido u noqon doonaa Man United” – Xiddig ka tirsan Kooxda Manchester City – Gool FM
“Bruno Fernandes waxa uu faa’iido u noqon doonaa Man United” – Xiddig ka tirsan Kooxda Manchester City
(Manchester) 10 Feb 2020. Ciyaaryahan ka tirsan kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa ammaanay saxiixa cusub ee Manchester United Bruno Fernandes, waxaana uu xusay inay si fudud ula qabsan doono horyaalka Premier League.
Bernardo Silva ayaa shaaca ka qaaday in xiddiga ay isku waddanka yihiin ee Bruno Fernandes uu guulo gaarsiin doono Manchester United kaddib markii uu yimid England.
“Aad ayaan ugu faraxsanahay isaga, aad ayaan ugu faraxsanahay inuu u ciyaarayo mid ka mid ah kooxaha ugu waa weyn Adduunka, waxaan qabaa inuu wax weyn ka qaban doono Man United” ayuu Silva u sheegay Sky Sports.
“Bedelidda mar walba waa ay dhib badan tahay, waa inaad la qabsataa habka kooxdaada cusub u ciyaarto, asxaabtaada kooxda, habka uu macallinku doonayo inuu u ciyaaro, mararka qaar nidaamyo cusub, sidaasi darteed waa laga yaabaa inay qaadato dhowr bilood, laakiin waxaan u malaynayaa inay fiican tahay inuu halkaan joogo, wuxuuna faa’iido weyn u noqon doonaa Man Utd – laakiin waxaan rajeynayaa inuusan ka hor imaan Man City.”
“Waxaa u malayanayaa in Fernandes uu u socdo inuu qabatimo Premier League, horay waxa uu uga soo ciyaaray Talyaaniga markii uu yaraa, sidaasi darteed, ma’ahan qibraddiisii ugu horreysay ee dibadda.”
“Markii ugu horreysay ee aan la ciyaaro Bruno, waxaan jiray 18 sano, sidaa darteed kulankeygii ugu horreeyay ee xulka Portugal ee da’doodu ka yar tahay 19-sano jirrada waxa uu ahaa kii ugu horreeyay Bruno ee Portugal, kaddib waxaan u wada ciyaarnay xulka 21-sano jirrada, iminka xulka qaranka waa weyn, haddana waxaan ku sugannahay magaalada Manchester sidaa darteed waa wax weyn, waan tartameynaa laakiin waa ay fiican tahay inaan halkaan isaga ku haysanno. ”
Saakay iyo Waxyaabihii ay Wargeysyadu ka qoreen Suuqa kala iibsiga Xiddigaha… (Pogba, Firmino, Coutinho & Kuwo kale)